စာရေးသူ ၁၀၀ ကျော်သည်သူတို့၏ဗဟုသုတကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစာအုပ်တွင်မျှဝေကြသည် Martech Zone
အကယ်၍ သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၁၀၀ နှင့်စကားပြောပြီးသူတို့၏အကြီးမားဆုံးအကြံဥာဏ်ကိုမျှဝေနိုင်လျှင်ကော။ ဒါကနောက်ကွယ်မှအတွေးဖြစ်ခဲ့သည် ပိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးစာအုပ်, Tyler နှင့်မှာအဖွဲ့ကတီထွင်တဲ့စီမံကိန်းကို Self- ထုတ်ဝေရေးစနစ်.
မင်းရဲ့ဆင်ခြေတွေအားလုံးပျက်ပြယ်သွားတယ် - အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့သင့်မှာအတွေ့အကြုံ၊ ငွေကြေးဒါမှမဟုတ်အကူအညီမလိုဘူးဆိုတာသက်သေပြတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်နှစ်ခု - pg ။ ၉
သင်တစ်ချိန်ကမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်ဖို့လိုတယ် - အချိန်ကာလအကြီးမြတ်ဆုံးအနုပညာရှင်တစ် ဦး ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ ၅၀၀၀၀ ကျော်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်
ဘာကြောင့် 'သင်ကြိုက်သလောက်လုပ်ပါ၊ ပိုက်ဆံကနောက်သို့လိုက်မည်' သည်သင်ရရှိမည့်အဆိုးဆုံးအကြံပေးချက်တစ်ခု (နှင့်သင်အစားဘာလုပ်သင့်လဲ) သည် - pg ။ ၁၇
သင်၏ယခင်ပျက်ကွက်မှုများ၏ ၉၉% နောက်ကွယ်ရှိအကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ (၎င်းသည်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်။ ) ထို့နောက်၎င်းကိုအသုံးပြုပါ
နောက်တဖန်သင်သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်လွန်ကျူးခြင်းများအားဖြင့်လေဖြတ်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနိုင်အောင်ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက် - pg ။ ၃၂
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကျော် (ယနေ့အလျင်အမြန်ရှေ့သို့) ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုခုကိုရလိုသောအခါတိုင်းဤခြေလှမ်းများကိုလှမ်းလှမ်းသည် - pg ။ 7
အတွေ့အကြုံမရှိသောကြောင့်အခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်း? တိုင်းပြည်ရှိထိပ်တန်း Needlecraft အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှကျွန်ုပ်သင်ယူခဲ့ရသောသင်ခန်းစာ (အပ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်သူ) ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီခဲ့သည် - ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီမှသည်ချိန်းတွေ့ခြင်းအထိ - pg ။ 57
ပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ၉ ရက်ပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ပြီးဒေါ်လာ ၁၈၀၀ အတွက်အပိုဆိုင်း + အချိန်ပိုကိုသာအကာအကွယ်ပေးသည်။ သူ၏, ည့်သည်၊ ဘဏ္Advာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (၃၅) မိနစ်တွင်တူညီသောပမာဏကိုရရှိသည်။ ခြားနားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာများကိုရှာဖွေပါ။ (အရိပ်အမြွက် - ၎င်းသည်သူ၏ဘွဲ့မဟုတ်) pg ။ ၆၀
မကောင်းသောအရာနှင့်မကောင်းသောအရာနှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကိုလုပ်ကိုင်ခြင်း၏ရုပ်ဆိုးသောအရာ - ကောင်းသောအရာကိုမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာခြင်း၊ မကောင်းမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ရုပ်ဆိုးသောအဝေးမှရှောင် ထွက်၍ သင်၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်ခရီးစဉ်၏မိနစ်တိုင်း၌ပျော်မွေ့ခြင်း - pg ။ ၆၉
Business School တွင်သင်လေ့လာခဲ့ရာများကိုမမေ့ပါနှင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရောင်းစာရေးမကဲ့သို့အသံမပါဘဲမည်သည့်သဘောတူညီမှုကိုမဆိုပိတ်ဆို့ရန်အော်စကာချဉ်းကပ်နည်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာပါ။ (အကယ်စင်စစ်သင်သည်အိုလံပစ် Sprinter သို့ချိုင်းထောက်များကိုရောင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်) - pg ။ ၇၇
ကျွန်ုပ်၏ nugget ကိုအခန်းတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းကိုနားထောင်တာကိုရပ်လိုက်ပါကျွန်ုပ်၏အေဂျင်စီတွင်အလွန်ဆိုးရွားသည့် နှစ်မှစ၍ ခက်ခဲသောလမ်းစဉ်ကိုသင်ယူခဲ့သောကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသင်ခန်းစာကိုမျှဝေထားသောနေရာ။ ငါတကယ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါကုမ္ပဏီပြန်လမ်းကြောင်းမှအဘယ်အရာကိုသင်ယူခဲ့တာလဲ ငါကွဲပြားခြားနားသောအဘယ်သို့ပြုမည်နည်း မင်းစာအုပ်ဝယ်ပြီးမင်းကိုယ်တိုင်ကြည့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
The Better Business Book ကိုဝယ်ပါ
Tags: ပိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးစာအုပ်စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်douglas karrပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းSelf- ထုတ်ဝေလူတိုင်းကိုနားထောင်တာကိုရပ်လိုက်ပါ